I-Cosy S3 Apartment @ Sidi Bou Said Village
Site archéologique de Carthage, Tunis, i-Tunisia
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Nour & Nabil
Ifulethi elihle nelithokomele elinamagumbi okulala ama-3 elisenkabeni yedolobhana lenganekwane laseSidi Bou Said amamitha ambalwa ukusuka eCafé Des Nattes. Ifulethi linethala langasese. Ukusuka ophahleni, ungabuka ukubukwa kwe-panoramic kwe-360 kolwandle iMedithera, iCarthage, iTunis kanye ne-lighthouse.
Leli fulethi linegumbi lokuhlala elikhulu elikhanyayo, amagumbi okulala amathathu azimele (amabili anombhede ophindwe kabili nelilodwa elinombhede owodwa), ikhishi elihlomele kahle, igumbi lokugezela.
Ifulethi lihlome ngokuphelele:
-Ama-air conditioner egumbini lokuphumula kanye negumbi lokulala elibomvu
- Umshini wekhofi
-TV / iziteshi zekhebula/ NETFLIX / AMAZON VIDEO
I-HDTV ene- Isevisi evamile ye-cable kamabonakude, ikhebula ye-premium, I-Netflix, I-Amazon Prime Video
4.79(77 okushiwo abanye)
4.79 · 77 okushiwo abanye
Indawo yayo enkabeni yedolobhana elihle laseSidi Bou Said iseduze nezindawo zemivubukulo. Kungamamitha ambalwa ukusuka ezindaweni zokudlela nezindawo zokudlela, izindawo zemibukiso yezobuciko kanye ne-Ennejma Ezzahra Palace (isikhungo somculo wama-Arabhu nowaseMedithera). Ifulethi liyimizuzu eyi-10 ukusuka ethekwini nasebhishi.
Ibungazwe ngu-Nour & Nabil
Ngizotholakala ukuze ngiphendule noma yimiphi imibuzo noma izincomo ngocingo / Whatsapp / Viber / Imessage
UNour & Nabil Ungumbungazi ovelele